देशमा यस्ता पनि प्रहरी छन्, जसले आफ्नो सबै तलबभत्ता समाजसेवामा खर्चन्छन् — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » अन्तर्वार्ता, मुख्य समाचार, स्वास्थ्य → देशमा यस्ता पनि प्रहरी छन्, जसले आफ्नो सबै तलबभत्ता समाजसेवामा खर्चन्छन्
देशमा यस्ता पनि प्रहरी छन्, जसले आफ्नो सबै तलबभत्ता समाजसेवामा खर्चन्छन्
August 11, 2015८४४ पटक
गुल्मी, साउन २६ – प्रहरी जवान दीपक थापा, प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको १२ वर्ष भयो । थापाले आफ्नो तलबभत्ता समाजसेवामा खर्च गर्दै आएका छन् । थापा जहाँ सुरुवा हुन्छन्, आफ्नो तलब–भत्ता त्यहीँको समाजसेवामा खर्चन्छन् । थापा धार्मिक प्रवृत्तिका छन्, पूजापाठ गर्छन्, माछामासु खाँदैनन् । यतिमात्रै होइन, जीवनभर ब्रह्माचारी बस्ने प्रण नै गरेका छन् । आध्यात्मिक सोचका अविवाहित थापा अहिले २८ वर्षका भए । उनी बुटवल उपमहानगरपालिका–१६ पदमपुरमा ७ मंसिर ०४२ मा जन्मेका हुन् ।
थापा ५ पुस ०६१ मा बुटवल तालिम केन्द्रबाट नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका हुन् । तालिम सकेर अञ्चल प्रहरी कार्यालय भैरहवामा खटिए । फेरि बुटवल तालिम केन्द्र फर्के, डिएसपीको सुरक्षा गार्डमा । त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीमा पाँच वर्षसम्म बसे । त्यहाँ छँदा पनि उनी जिल्ला अस्पतालमा खटिए ।
थापा ०६७ सालमा नवलपरासीबाट सरुवा भएर गुल्मी आएका हुन् । थापा गुल्मीबाट हालै कपिलवस्तुको सुन्दरीडाँडा ईलाका प्रहरी कार्यालयमा सरुवा भएका छन् ।
चार वर्ष थापाले आफ्नो कर्तव्य मात्रै निभाएनन्, समाजसेवामा पनि उत्तिकै ध्यान दिए । प्रथम गुल्मी महोत्सवलाई २० हजार चन्दा दिए भने पर्यटन वर्ष–२०११ मनाउन १० हजार सहयोग गरे । नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीको भवन निर्माणका लागि १० हजार उपलब्ध गराए । गायन प्रतिभा छनोट कार्यक्रम गुल्मी तारा–०७१ लाई पनि रकम सहयोग गरे । प्रथम गुल्मी ताराका लागि भनेर पाँच हजार, दोस्रोका लागि तीन हजार र तेस्रोका लागि दुई हजार रुपैयाँ सहयोग गरे ।
गुल्मी जिल्ला अस्पतालमा उनको ड्युटी थियो । कतिपय बिरामीलाई अस्पतालले तानसेन रिफर गथ्र्यो । कतिपय बिरामीसँग खर्च हुँदैनथ्यो, थापाले थुप्रैलाई आफूले सकेको आर्थिक सहयोग गरे । अस्पतालमा आर्थिक अभाव हुन पुगेका बिरामीलाई औषधि पनि किनिदिन्थे ।
जिल्ला अस्पतालबाट उनलाई गुल्मीकै नयाँगाउँ प्रहरी चौकीमा सरुवा गरियो । प्रहरी चौकीको प्रांगणमा बन्दै गरेको मन्दिर रकम अभावमा रोकिएको थियो । मन्दिर निर्माणका लागि उनले ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ सहयोग गरे । त्यस्तै, पाँच हजार रुपैयाँ खर्चेर चौकीमा डिसहोम केबुल जडान गरे । नयाँगाउँ उच्च माध्यामिक विद्यालय विकासका लागि २५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरे । सोही विद्यालयमा उनले आफ्नै नाममा १० हजार रुपैयाँको दीपक थापा अनुशासन वर्ष पुरस्कारको स्थापना पनि गरी दिएका छन् ।
त्यस्तै, गणेश माध्यामिक विद्यालय पिपलधारामा ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गरिदिए । त्यति नै धनराशिको अक्षय कोष पिपलधाराकै ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय, सोमरभोमर माध्यामिक विद्यालय हाडहाडे र छिमेकी जिल्ला अर्घाखाँचीको खनदह उच्च माध्यामिक विद्यालयलाई पनि कोष स्थापना गरी दिएका छन् ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा उनले नयाँगाउँमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनका लागि २० हजार सहयोग गरे । पिपलधारामा एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि १५ हजार ५१ रुपैयाँ सहयोग गरे । यसबाहेक नयाँगाउँ आर्थिक अभावका कारण उपचार पाउन नसकेका र भोकानांगालाई सेवा गरेको उल्लेख गरी साध्य छैन ।
थापाले गत १२ वैशाखको भूकम्पबाट पीडितलाई एकमुष्ठ डेढ लाख रुपैयाँ सहयोग गरे । थापाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा डेढ लाख रुपैयाँ पठाए । त्यस्तै, थापाले काठमाडौंका तीनवटा वृद्धाआश्रमका लागि तीन लाख सहयोग गरेका छन् ।
थापा भन्छन्, ‘१२ वर्ष भयो जागिर खाएको । आफूलाई सामान्य खर्च राख्छु । मैले तडकभडकमा खर्च गर्दिनँ । बाँकी सबै समाजसेवामा दिन्छु ।’
थापाको घरखर्च कसरी चलेको होला त ? उनी भन्छन्, ‘बुवाले २० वर्षसम्म भारतमा बैंकको जागिर गर्नुभयो । पेन्सन आउँछ । बुटवलमा पाँचतले पक्की घर छ । तीनतला भाडामा दिएका छौं । अलिअलि जमिन पनि छ, अरुलाई कमाउन दिएका छौँ । मैले ब्रह्माचारी बस्ने प्रण गरेको छु, त्यसैले परिवार वा भोलिका कमाउनु पनि छैन ।’
थापा सामान्य पहिरनमा हिँड्छन् । नियमित मन्दिरमा पूजा गर्ने र रातो टीका लगाउने गर्छन् ।
सम्पत्ति नकमाउने, सन्त बन्ने भन्ने तर प्रहरीको जागिरमा यत्तिका मोह किन ? सन्त बन्न त प्रहरीको जागिर छाडे हुँदैन ? उनको जवाफ छ, ‘प्रहरी पनि सन्त बन्न सक्छ, प्रहरी भएरै पनि समाज सेवा गर्न सकिन्छ । के ब्रह्मचारी बन्न प्रहरीको जागिर छाड्नैपर्छ र ? म प्रहरी सेवामै रहेर सत्य बोल्छु, समाजसेवा गर्छु, ब्रह्मचारी बस्छु ।’
थापा एक मात्र छोरा हुन् । छोरो ब्रह्मचारी बन्न लागेको परिवारलाई पनि चिन्ता थियो । उनी भन्छन्, ‘हामी चार भाइ हौँ । तर, तीनभाइ सानैमा खसे । म पनि ब्रह्मचारी बन्ने कुरा सुनेपछि सुरुमा बुवाआमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, निसन्तान हुनेभयो भनेर । तर, अहिले मेरो समाजसेवा देखेर, शुद्ध व्यवहार देखेर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।’
थापाबारे निमित्त जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक रामप्रसाद पौड्याल भन्छन्, ‘थापाले सामाजिक क्षेत्रमा गरेको काम उदाहरणीय छ । उनी सामान्यतः एउटा प्रहरी जवानभन्दा फरक स्वभावका छन् ।’ थापाले समाजसेवासँगै आफ्नो जिम्मेवारी पनि पूरा गर्छन् । नयाँगाउँ प्रहरी चौकीका इन्चार्ज विश्वराज भुसाल भन्छन्, ‘जवान थापाको ड्युटीमा कुनै गुनासो गर्नुपर्ने भएन । उनले आफ्नो ड्युटी पूरा गर्थे, प्रहरीको आचारसंहिता पनि मान्थे, कुनै पनि अनुशासनहीन काम गरेनन् ।’
थापालाई सोमबार नयाँगाउँ, पिपलधाराका संघ–संस्थाले सम्मानसहित बिदाइ गरे । गुल्मीबाट उनी कपिलवस्तुमा सरुवा भएका हुन् ।